१fफिट HVLS छत फ्यान १33, 00 ००० CFM PMSM वाणिज्यिक ठूलो कूलिing प्रशंसक
१. हावा उडाउने लामो कभरेज क्षेत्र १3939 00 ०० सीएफएम हुन सक्छ।
२. ठूलो खुला ठाउँमा प्रयोगको लागि उचाई 3.5. meters मिटर भन्दा बढि छ।
S.शान्त र ऊर्जा कुशल ठूलो औद्योगिक छत प्रशंसक lowest न्यूनतम सेटिंगमा heating०% सम्म कम तताई ऊर्जा खपत
के तपाइँ बसाईदारहरुलाई अधिक सहज बनाउन र तपाइँको पैसा बचाउन चाहानुहुन्छ? हामी तपाईंलाई व्यापारिक ठाउँहरू जस्तै अफिस, रेस्टुरेन्टहरू, थिएटरहरू र अन्यका लागि उत्तम समाधान-व्यावसायिक कूलि fans प्रशंसकहरू प्रदान गर्नेछौं।
हाम्रो व्यावसायिक छत प्रशंसक को सुविधा को लागी सहज र खुशी बनाउन को लागी कोमल र चुपचाप हावा को ठूलो मात्रा परिभ्रमण गर्न सक्दछ, र पनि कर्मचारीहरु स्वस्थ र अधिक उत्पादक राख्न।
उच्च छत र प्रशस्त वर्ग फुटेजको साथ, ठूला औद्योगिक सुविधाहरू जस्तै जिम वा खेल केन्द्र वायु प्रवाह र भेन्टिलेसन चुनौतिहरूको सामना गर्दछ। ठूलै र ठूलो फराकिलो ठाउँ खाली तान्न एक चुनौती हो किनभने चिसो वा हावा को तापीय HVAC उपकरण र अपरेटिंग लागत मा भाग्य खर्च गर्न सक्दछ।
व्यास १F एफटी
वायु मात्रा 133931CFM
अधिकतम गति R०RPM
कभरेज 43 4843s वर्गफुट
मोटर प्रकार PMSM मोटर
फ्यान प्रकार औद्योगिक, वाणिज्यिक, कृषि
सीमित वारंटी वर्षहरू १ (एयरफाइलमा लाइफटाइम)
ब्लेड सामग्री एल्युमिनियम मिश्र
माउन्ट प्रकार छत
फ्यान वाट्स 400W
गति को संख्या परिवर्तनशील
फ्यान हाउसिंग रंग कालो
फ्यान ब्लेड रंग खैरो
ब्लेडहरूको संख्या 6
वातावरणीय अनुप्रयोगहरू औद्योगिक, वाणिज्यिक, जिम
OPT वाणिज्यिक PMSM छत कूलि fans प्रशंसक छनौट गर्न कारणहरू
१. आरामदायी कार्य वातावरण सृजना गर्ने: यसको १39 39 00 C०० सीएफएम एयर मात्रा, उच्च-भोल्युम, कम-स्पीड प्रशंसकहरू पर्याप्त प्रभावी HVLS ठूला व्यावसायिक प्रशंसकहरू व्यावसायिक स्थानहरूको लागि हो। यस सर्कुलेटिंग हावा कोमल छ र ग्राहकहरूलाई सहज महसुस गर्न र तपाईंको कर्मचारीहरूको स्वास्थ्य सुधार गर्न सक्दछ।
२. लागत लागत खपत: ०..4 किलोवाट प्रशंसक शक्तिको साथ, ठूला व्यावसायिक छत प्रशंसकहरू एक लागत-प्रभावी समाधान हो जुन तपाईंको वाणिज्यिक सुविधालाई कूलिbबिलहरू नियन्त्रणमा राख्न मद्दत गर्दछ।
आधिकारिक स्थान जस्तै शपिंग मॉलले व्यावसायिक प्रशंसकबाट फाइदा लिन सक्छ
१. ठूला ब्यापार छत प्रशंसक स्थापना गर्नाले, तपाइँका कर्मचारीहरूले बढी सहज महसुस गर्नेछन् र उनीहरू अझ फलदायी बन्नेछन्।
२.तपाईंका ग्राहकहरु तपाईको स्टोर मा अधिक फ्रिक्वेन्सी फिर्ता हुनेछ यदि उनीहरु सहज महसुस गर्छन्। र कम गति र शान्त आवाज उनीहरूको लागि राम्रो छ।
S.शपिंग मललाई चिसो गर्न गाह्रो छ, किनकि यसको ठूलो खुला ठाउँ छ। गर्मीमा असहनीय तापले चिसो बिलहरू छिट्टै बढाउँदछ। जबकि हाम्रो ठूलो व्यावसायिक छत प्रशंसकहरूको ठूलो हवाई आवागमन क्षमताले यी समस्याहरूलाई प्रभावकारी रूपमा समाधान गर्न सक्दछ र विद्युतीय लागत कम गर्दछ।
अघिल्लो: 12 फिट HVLS छत फ्यान PMSM वाणिज्यिक प्रशंसक सार्वजनिक 109,200CFM का लागि
१० फिट HVLS छत फ्यान - PMSM मोटर-मैं ...
१२ फिट HVLS छत फ्यान PMSM वाणिज्यिक प्रशंसक को लागी ...
OPT 10FT HVLS PMSM मोटर औद्योगिक कूलिंग भेन ...